लौरा मास। La maestra de Sócrates | का लेखकसँग अन्तर्वार्ता वर्तमान साहित्य
लौरा मास। सुकरातको शिक्षकका साथ अन्तर्वार्ता
फोटोग्राफी: (c) एना पोर्टनो। लौरा मासको सौजन्य।
लौरा मास उनी जन्मबाट क्यानरी टापुकी छिन्। डिग्री पत्रकारिता, विभिन्न मिडियामा सहयोग गरीरहेको छ र एक साहित्यिक प्रबन्धक पनि हो। कविता फ्यान, अब साहित्यमा छलांग बनाएको छ एक ऐतिहासिक विधा डेब्यू उपन्यास संग, सुकरातका शिक्षक. म यसको लागि तपाईंको समय र दयाको म साँच्चिकै कदर गर्छु साक्षात्कार कि उसले मलाई प्रदान गर्यो।
लौरा MAS - साक्षात्कार
लिटरेचर आज: साहित्य मा तपाईंको पहिलो उपन्यास हो सुकरातका शिक्षक। यसले हामीलाई के भन्छ?
लौरा MAS: मेरो उपन्यास वर्णन गर्दछ डियोटिमा र सुकरात बीच मुठभेडहरूको एक श्रृंखला जसमा शिक्षकले विद्यार्थीलाई प्रेमको सही अर्थ सिकाउँदछन्। मलाई चाहिएको महसुस भयो पुजारी र दार्शनिक डियोटिमा को फिगर बचाउनुहोस् जसमा शायद नै केहि थाहा छ, तर भित्र देखा पर्छ भोज प्लेटोको एक क्रान्तिकारी र दागी महिलाको रूपमा। उनका विचारहरूले प्लेटोनिक प्रेमको अवधारणालाई प्रेरित गरे जसको वास्तविक अर्थ वर्तमानबाट धेरै टाढा छ।
LM: मैले पढेको पहिलो पुस्तकहरू मध्ये एक थियो सानो राजकुमारएन्टोइन डे सेन्ट-एक्सप्युरी द्वारा। यो एक सचित्र संस्करण हो जुन मेरो बुबाले मलाई दिनुभयो र म निरन्तर पढ्ने गर्छु। उपन्यास लेख्नु अघि, म थियो मेरो सानो कदम केहि लेख्दै कथा र कविताहरू म्यागजिन र एन्थोलोजीहरूको लागि।
AL: त्यो उपाधि के हो जसले तपाईंलाई हिर्कायो र किन?
LM: जब म किशोरावस्थामा थिएँ, यसले मलाई धेरै चिन्ह लगायो युवा वर्थरको दु: खगोएटे द्वारा। यसको नायकको उत्कटता र संवेदनशीलताले मलाई गहिरो उत्प्रेरणा दियो, किनकि त्यसबेला म पनि एक जना युवा थिएँ र प्रेममा उदासीन।
AL: एक मनपर्ने लेखक? तपाईं एक भन्दा बढि चयन गर्न सक्नुहुनेछ र सबै युगहरूबाट।
LM: मार्गुरेट तपाईंको सेनर, अल्बर्ट क्यामस, रोबर्ट लास, क्लारिस लिस्पेक्टर... सूची धेरै लामो हुनेछ। तीन समकालीन लेखकहरू जसले मलाई कहिल्यै निराश पार्दैनन् लोरेन्जो हुन् ओलिभन, चेन्टल माइलार्ड र लुइस गार्सिया Montero.
LM: त्यहाँ धेरै छन् ... यदि म एक संग रहनु पर्छ, यो पक्कै जटिल र nonconforist हुनेछ Emma bovary त्यो फ्लोबर्टले सिर्जना गरेको हो।
AL: लेख्न वा पढ्दा कुनै विशेष बानी छ?
LM: लाई लेख्नुहोस् मलाई एकान्त चाहिन्छ र म प्राय: लगाउँछु शास्त्रीय संगीत बाच, चोपिन वा डेबसिरी जस्ता उत्कृष्ट रचनाकारहरूको। यसले मेरो दिमागलाई अमूर्त गर्नमा मद्दत गर्दछ र मेरो लेखनको ब्लो राम्रो बनाउँदछ। यसको सट्टामा मलाई बढ्दो चाहिन्छ मौन को समयमा ली र म यसलाई एक कप चिया वा कफी पिउन, सोफा वा ओछ्यानमा र मेरो बिरालाहरूको साथमा पेसा गर्न मनपराउँछु।
LM: दुबै लेखन र पठनका लागि उत्तम स्थान हो मेरो भुइँ। त्यहाँ मैले मानसिक शान्ति र ध्यान केन्द्रित गर्न शान्ति र विश्राम पाएँ। को समयमा लेख्नुहोस्, हालसालै म प्रकाशको घण्टाको फाइदा लिन चाहन्छु; पहिले यो एकदम निश्चिन्त थियो, तर अब म सुरु गर्छु दैनिक लेख्ने तालिका बिहानको पहिलो घण्टा। यसको सट्टा, म मैदान ली छ बजेदेखि सुरू दोहोरो र कहिलेकाँही यिनीहरू मलाई दिनुहुन्छ यदि पुस्तकले मलाई समात्यो।
LM: ऐतिहासिक विधा बाहेक, मलाई वास्तवमै मनपर्दछ परीक्षण, ला जीवनी र, अवश्य पनि कविता.
LM: मेरो सम्पादक मिर्याम गलाजको सिफारिशमा, म अहिले पढ्दै छु काकेशसका दिनहरूBanine द्वारा। म मेरो दोस्रो उपन्यास लेख्ने क्रममा छु, जुन ऐतिहासिक थ्रिलर हुनेछ जुन धेरै दरबारका षडयन्त्रहरू सहित हुनेछ।
AL: के हामीले सामना गरिरहेका संकटको क्षण तपाईंको लागि गाह्रो भैरहेको छ वा केहि सकारात्मक राख्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईंलाई भविष्यका काल्पनिक कथाहरूको लागि सेवा पुर्‍याउँछ?
LM: मलाई लाग्छ सबैलाई हामी केहि सकारात्मक शिक्षण संग रहन सक्छौं महामारीको नतीजाको रूपमा, यद्यपि हामी सबै तहमा धेरै नै जटिल समयबाट गुज्रिरहेका छौं। मलाई लाग्छ कि कुनै न कुनै तरिकामा र म यस बारे पूर्णतया सचेत छैनँ, किनकि म ऐतिहासिक उपन्यास लेख्छु, मेरा भावनाहरू र अनुभवहरू मेरो गीतमा झल्किन्छन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » साक्षात्कार » लौरा मास। सुकरातको शिक्षकका साथ अन्तर्वार्ता